Abenzi baseChina basemhlabeni kunye nabathengisi | Dongheng Oomatshini
Inqaku leKUMKANI wethu womhlaba
I-KINGER yomhlaba auger ineemodeli ezingama-25 ezisusela kwi-YDH mini ukuya kwi-YDH150000, efanelekile kwisicoci se-0.8-50ton, i-skid steer kunye ne-backhoe loader njl.
Iwaranti yonyaka omnye yemoto kunye neenyanga ezili-18 iwaranti yebhokisi yebhokisi.
Sinikezela ngenkxaso yobuchwephesha kunye nenkonzo ye-Intanethi.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO WEMOTO
Ukusebenza kakuhle kwe-KINGER kuthetha ukuba sihlawula ngakumbi ukuphuhlisa izinto ezinokuthenjwa kubathengi.
Ukuqhubekeka kwezixhobo kwamkela itekhnoloji yokulungisa ubushushu ekhethekileyo, ethi iphuhliswe nguGqirha weYunivesithi yaseTsinghua.
UKUNGABIKHO KWAMANDLA OKUGAWULWA KWEZINTO
Ukhetheke kwi-KINGER yomhlaba auger, i-Shaft-Dislodgement Shaft yindawo enye eqokelelweyo ukusuka phezulu ukuya phezulu kwaye itshixiwe kumaleko omhlaba wokugrumba.
Olu luyilo luqinisekisa ukuba ishafti ayisoze yawa, inokwenza indawo yokusebenza ekhuselekileyo kubo bonke abaqhubi kunye nakwabanye abasebenzi abangqongileyo, okuyimfuneko eyimfuneko.
Iseti iphela ibandakanya iinxalenye ezi-6 njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Sine-pin hitch eyodwa, i-pin pin hitch kunye ne-cradle hitch yokudibanisa i-KINGER auger drive kunye ne-excavator / backhoe loader / skid steer njl.
Senza i-auger drill kunye ne-bar yokwandisa ngokwethu. Kukho i-8mm, 10mm, 12mm kunye ne-16mm ubukhulu bokubhabha kwe-auger ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo zokusebenza. Uluhlu lobubanzi luvela kwi-100mmto 2000mm.Sinokwenziwa njengemfuno yakho.
Ngokubhekisele kwi-bar yokwandiswa, kukho i-1n, 1.5m, 2.5m, 3m ubude obahlukeneyo obulungiselelwe ubukho.
Ububanzi be-bar yolwandiso yi-89mm, 108mm, 127mm kunye ne-146mm.
Xa kufikwa kukhetho lwamazinyo, sinamazinyo okusika, amazinyo ajikelezileyo kunye namazinyo athe tyaba kwimeko-yomhlaba eyahlukileyo.Amazinyo okusika asetyenziselwa ukunyikimisa, ukubamba okanye umhlaba omninzi wegrabile. Amazinyo angqukuva asetyenziselwa ukwenza udongwe, umhlaba oyisanti, umhlaba okhenkcezisiweyo okanye igrabile encinci.
I-KINGER earth auger isebenza ngokubanzi kumandla ombane, amahlathi, imisebenzi yoomasipala yokunxibelelana, umzila kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, Ukulungiswa kwemihlaba, ukutyala umthi, Ukudika kakuhle, iimfumba ezisisiseko, ukufakela imfumba, Imithombo yempompo yobushushu bomhlaba, ukufakelwa kwePole kunye nokuFakwa kweMast, Ukubekwa kwamandla elanga, ibhulorho ukubhola ipier njl.
I-KINGER earth auger yi-A \_ esebenzayo kwiintlobo ngeentlobo zomhlaba, ezinje ngomhlaba oqingqiweyo, umhlaba ococekileyo, umhlaba othambileyo, udongwe, isanti, iifosili zomoya, kunye negrabile, iingqalutye njalo njalo.
Sisebenzise ivanishi yokubhaka kunye nepeyinti yomhlaba egudileyo ngaphandle kokuxobuka. Iindawo eziveziweyo ziphathwa ngothintelo lomhlwa. Iimveliso ezithunyelwa ngaphandle zipakishwe kwiimeko zeplywooden ukuqinisekisa ukuba akukho bump, rust kunye nezinye izinto ngexesha lokuhamba.
Phumeza umbono wehlabathi wokhuselo lokusingqongileyo, ukunciphisa ukusetyenziswa kweplastiki kunye nezinye izinto zokupakisha ezonakalisa kakhulu imeko-bume.
Ngasentla isikhombisi sisalathiso sakho.Sinokutshatisa imodeli efanelekileyo ngokobunzima be-excavator yakho.
Egqithileyo Umxube webhakethi
Okulandelayo: Isicoci seMINI